Xubno ka mid ah Gudida fulinta UDUB oo Baaq U jeediyay Gudoomiye Ku xigeenkooda | Somaliland.Org
Xubno ka mid ah Gudida fulinta UDUB oo Baaq U jeediyay Gudoomiye Ku xigeenkooda
April 29, 2012	Hargeysa(Somaliland.Org)-Masuuliyiin ka tirsan xisbiga kala daadsan ee ee UDUB ayaa maanta ka hadlay khilaafka soo kala dhex galay gudoomiyaha xisbiga iyo gudoomiye ku xigeenka xisbigaas kaas oo sababay in gudoomiye ku xigeenka xisbiga UDUB Axmed Yuusuf Yaasiin uu maxkamada sare u gudbiyo dacwad ka dhan ah gudoomiyaha xisbigaas Daahir Rayaale Kaahin.
Wasiirkii hore ee hawlaha guud iyo guriyaynta Siciid Sulub Maxamed oo ka hadlay shir jaraa’id oo ay ku qabteen xarunta dhexe ee xisbiga UDUD ayaa ku dooday in sida ugu dhakhsaha badan loo soo afjari doono khilaafkii mudooyinkii u dambeeyay ka dhex aloosnaa xisbigaasi, waxaanu u soo jeediyay Gudoomiye ku xigeenka xisbiga UDUB Md. Axmed Yuusuf Yaasiin inuu la noqdo waraaq dacwad ah oo ka dhan ah Guddoomiyaha xisbiga UDUB, taasi oo uu ku sifeeyay mid aan waafaqsanayn xeerka xisbigooda.
Guddoomiyaha abaabulka iyo wacyi-gelinta xisbiga UDUB Maxamuud Cabdi Faarax (Maxamuud Cabdi Malow) oo shirkan jaraa’id ka hadlay ayaa hadlay marxaladihii uu soo maray xisbigaasi oo uu tilmaamay inuu ahaa xisbigii ugu horeeyay ee dalka laga furay ee bud-dhiga u ahaa aasaaskii asxaabta qaranka.
Guddoomiyaha abaabulka iyo wacyi-gelintu wuxuu ku dooday inaan loo baahnayn in la xagal daaciyo xisbiga UDUB waxaanu tallooyin u soo jeediyay Hoggaanka xisbigaasi, waxaanu yidhi “Marka uu xisbiga UDUB taariikhdaas leeyahay waa inaanu maanta u qalmin in muran la galiyo xeerkiisa, inaanu u qalmin in hogaanka xisbiga muran la galin, umana qalmo in barnaamijkiisa siyaasadeed dhexda laga xagal daaciyo ama laysku dayaba.”
“Waxaan aaminsan n ahay in masuuliyiinta xisbiga UDUB laga bilaabo hogaankiisa illaa xubnaha ku jira xisbigu ay u baahan yihiin inay keenan caqli. laakiin aanay u baahnayn inay cadho keenaan iyo inuu xisbigu u baahan yahay dhisme wada jira,walaaltinimo ah,iskaashiya ee aanu u baahnayn tafaraaruq, kala qaybsanaan iyo kooxaysi,”ayuu yidhi Maxamuud Cabdi Malow.
Cismaan C/laahi Cigaal (Cismaan Hindi) oo ka mid ah Garabka Axmed Yuusuf Yaasiin, oo shirkan jaraa’id ka hadlay ayaa sheegay in la soo afjari doono khilaafka ka dhex taagan xisbiga UDUB?”Waxaanu u sheegaynaa taageerayaasha xisbiga UDUB in khilaafkii ka dhex aloosnaa xisbigan sida ugu dhakhsaha badan la soo afjari doono, laakiin waxaanu leenahay gudoomiye ku xigeenka xisbiga UDUB waa inaanad sii dheerayn khilaafka xisbiga ee aad ka qayb qaadataa sidii loo soo af jari lahaa.”
Sidoo kale waxa shirkaasi jaraa’id ka hadlay Gudoomiyaha UDUB ee gobolka Awdal C/Casiis Xuseen Raagge “Waxaan shacbiga Somaliland iyo taageerayaasha xisbiga UDUB ka raali- galinayaa hadalo aan haboonayn oo baryahan ka soo baxayey qaar ka mida masuuliyiinta sare ee xisbiga UDUB,kuwaas oo ku andacoonaya in Gudoomiyaha sharciga ah ee Xisbiga UDUB aanu ahayn Daahir Rayaale Kaahin laakiin arrintaa cid xisbiga ah oo lagala tashaday ma jirto. gudoomiye ku xigeenka xisbigana waxaan leeyahay xisbiga xajiinta ka daa.?waxa jirtay in shir weynihii labaad ee xisbiga uu qabsoomay bishii 09/02/2009 waxaanu ka dhacay Hotel Maansoor, waxa ka soo qayb galay ergooyin fara badan oo gaadhaya 900 oo xubnood kuwaas oo ka kala yimi gobolada dalka, waxaaanay ku ansixiyeen xeerka xisbiga iyo barnaamijka siyaasada ee xisbiga iyada oo lagu doortay gudoomiyaha xisbiga iyo gudoomiye ku xigeenkiisa, waxaana lagu soo xulay musharaxiintii doorashada madaxtooyada uga qayb galay xisbiga.”
?”Maalin dhawayd waxaan maxkamadda sare ku arkay warqad la geeyey taas oo lagu soo qoray qodobka 11.7 ee xeerka xisbiga UDUB kaas oo sheegaya in musharaxiinta uga qayb galay xisbiga doorashada madaxtooyada haddii ay guul ka gaadhaan doorashada ay tartankeeda ka qayb qaadanayaan in doorashada kale aaanay cidina kula tartami doonin xisbiga dhexdiisa,”ayuu yidhi Guddoomiyaha xisbiga UDUB ee gobolka Awdal.
Previous PostDadweyne Cabasho ka dhan ah Musuqmaasuqa Hay’adda NRC La Hortagay D/Hoose Ee BurcoNext PostWasiirka warfaafinta oo ka hadlay Idaacadii weynayd oo maanta soo gaadhay xarunta wasaaradaas	Blog